Jiri iwu nloghachi dị na ,lọ Ahịa Apple, nwalee ịzụta ihe gị karịa oge | Esi m mac
Jiri uru nke iwu nloghachi na Storelọ Ahịa Apple, nwalee ịzụrụ gị na itinyekwu oge
Dị ka ọ na-adị, Apple gbatịrị oge nloghachi maka ngwaahịa azụrụ n'ụlọ ahịa ya n'ịntanetị, n'oge ekeresimesi. Iwu a na-emebu bụ ụbọchị iri na anọ, n'ụkpụrụ zuru oke iji mara ngwaahịa a, nwalee ya ma weghachite ya ma ọ bụrụ na ị tụlee na ọ gaghị adabara gị.
Agbanyeghị, afọ ole na ole gara aga Apple na nnukwu ụlọ ahịa ndị ọzọ gbatịrị oge a, ebe a na-azụ ọtụtụ n'ime ihe ndị a inye oge ekeresimesi. Ya mere, enwere oke oke iji weghachite onyinye ahụ ma ọ bụ gbanwere ya maka ọzọ ma ọ bụrụ na Santa Claus ma ọ bụ Ndị Amamihe Atọ ahụ ezighi ezi na uto anyị.
Ihe ndị a zụtara n’aka Onlinelọ Ahịa Apple nke enwetara n’agbata Nọvemba 10, 2016 na Disemba 25, 2016 nwere ike ị weghachite rue Jenụwarị 8, 2017. Biko rịba ama na usoro na ọnọdụ ndị ọzọ enyere na Apple Online Store Store na nkwụghachi iwu ka metụtara… Purchazụta ihe niile emere ka ọnwa nke iri abụọ na ise dị na mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na ise n’afọ 25 dị n’okpuru ọkọlọtọ ọkọlọtọ ọkọlọtọ.
Ọ bụ eziokwu na e nwere ụfọdụ ewezuga, ma ha bụ ihe ndị a na-ahụkarị maka inweta ọ bụla, dị ka:
Mepee ebe nchekwa.
Meghee akụrụngwa (ọ gwụla ma anyị jụrụ usoro ikikere)
Ihe nbudata software.
Kaadị Onyinye Apple.
Onyinye onyinye Apple (igbe onyinye yana rịbọn na kaadị ekele)
Echere m Anyị nwere ike iji nwayọ zụrụ ihe iji nye ma ọ bụ rie nke onwe anyị, tupu Disemba 25 wee nwee ike iweghachi ya rue Jenụwarị 8, 2017.
Ihe ahụ kwesịrị ịgụnye ihe niile dị na mbụ na nkwakọ ngwaahịa. Nhọrọ a metụtara ịzụrụ n'ịntanetị, mana ọ metụtara ịzụrụ ihe na ụlọ ahịa anụ ahụ. N'ezie, ha ga-abụrịrị ụlọ ahịa Apple Store. Ọ bụrụ na ịnweta ngwaahịa na oghere Apple na ụlọ ahịa, anyị ga-echerịrị ọnọdụ nloghachi nke ntọala ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Jiri uru nke iwu nloghachi na Storelọ Ahịa Apple, nwalee ịzụrụ gị na itinyekwu oge
Zụta nkwado nkwado taa ma nweta 150 € Apple Card Card
Apple nwere otu pụrụ iche iji weghachite data maka ọdịda nke MacBook Pro ọhụrụ